Shina Mill Grinding Ball ho an'ny fivoriambe voalohany: SAG Mill Manufacturing and Factory | Goldpro
Ny familiana baolina ho an'ny fivoriambe voalohany SAG milina dia manondro ny fikosoham-bary mifangaro ao anaty milina alohan'ny hahatratrarana ny SAG millages ny mari-pahaizana famoronana (na famokarana mahazatra). Noho ny tsy fahatomombanan'ny taram-paritra miasa, ny fahaizan'ny mpiasa, ny famelomana ny mineraly ary ny fiantraikany matetika eo anelanelan'ny baolina sy ny lambam-baravarana, ny toe-javatra dia mety hamporisika ny fahatapahan-drà fametaka baolina na linera hampihenana ny fiainam-panompoany, izay misy fiantraikany amin'ny famokarana fitsapana ary hampiakatra fiampangana fanampiny.
Taorian'ny fanadihadiana sy ny fitsapana maro, mifototra amin'ny toe-piainako, ny Goldpro dia namolavola ny fikosoham-bary mifangaro ho an'ny fivondronan'ny SAG voalohan'ny fivoriambe. Ny fampitana ny baolina fikosoham-bary dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny akora sy ny fizotran'ny fitsaboana fitsaboana mifanentana. Ny fametahana baolina amin'ny haingam-pandeha mahery vaika sy ny fiadiana amin'ny akanjo mety dia manome antoka ny fahafaha-manaingo na dia mifamatotra amin'ny fepetra miasa mafy tokoa ary mampihena ny fiantraikany amin'ny vilia. Tamin'ny alàlan'ny fanazaran-tena tamin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany dia nampiroborobo be ny famokarana natao sy nampihena ny vidiny.
Ampiharo amin'ny fomba hentitra ny rafitra ISO9001: 2008, ary nametraka rafitra fanaraha-maso sy fanaraha-mason'ny vokatra, rafitra fitsapana ny kalitao sy ny rafitry ny vokatra.
Miaraka amin'ny fitaovana fitsapana momba ny kalitao iraisam-pirenena, ny fepetra fanandramana dia mendrika miaraka amin'ny rafitra fanamarinana CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment);
Ny fenitra fitiliana dia voalamina tanteraka amin'ny SGS (Universal Standards), Silver Lake (US Silver Lake), ary ny laboratoara Ude Santiago (University of Santiago, Chile).
Hevitra "manontolo" telo
Fomba telo "manontolo" dia ahitana:
Mitaky fitantanana kalitao, fitantanana ny kalitao manontolo ary fandraisana anjara manontolo amin'ny fitantanana kalitao.
Fitantanana feno kalitao:
Ny fitantanana ny kalitao dia voarakitra amin'ny lafiny rehetra. Ny fitantanana kalitao dia tsy vitan'ny hoe mombamomba ny vokatra, fa koa mila mandinika ireo tranga toy ny vidiny, ny fotoana fandefasana sy ny serivisy. Ity no fitantanana feno kalitao manontolo.
Mandrindra ny fitantanana kalitao tsara:
Raha tsy misy dingana dia tsy misy vokatra. Ny fitantanana feno kalitao feno dia mitaky antsika hifantoka amin'ny lafiny rehetra amin'ny rojo vidy mba hahazoana antoka ny valin'ny kalitao.
Fandraisana anjara feno amin'ny fitantanana kalitao:
Andraikitra rehetra amin'ny fitantanana ny kalitao. Tsy maintsy mandinika tsara ny kalitaon'ny vokatra rehetra ny tsirairay, mitady olana amin'ny asany avy ary hanatsara azy ireo, handray andraikitra amin'ny kalitaon'ny asa.
Hevitra "ny zavatra rehetra" efatra
Ny fotokevitra kalitao "ny zava-drehetra" rehetra dia: ny zava-drehetra ho an'ny mpanjifa, ny zava-drehetra mifototra amin'ny fisorohana, miresaka daholo ny zava-drehetra, miaraka amin'ny tsingerin'ny PDCA ny zava-drehetra.
ny zavatra rehetra ho an'ny mpanjifa. Tokony handinika bebe kokoa ny filan'ny mpanjifa sy ny fenitra isika ary hametraka ny foto-kevitry ny mpanjifa aloha;
Mifototra amin'ny fisorohana ny zava-drehetra. Asaina mametraka foto-kevitra momba ny fisorohana, manakana ny olana alohan'ny hitranga izy ireo, ary manafoana ny olana ao am-bohoka azy;
Ny zava-drehetra dia miresaka amin'ny angon-drakitra. Tokony hisaina sy hamakafaka data isika mba hahitana ny fototry ny olana.
Miasa amin'ny tsingerin'ny PDCA ny zava-drehetra. Tokony hiezaka hatrany isika hanatsara ny tenantsika sy hampiasa ny fisainana rafitra hahitana fanatsarana mitohy.
Previous: Famatotra baolina ho an'ny Mill Mill
Fikosoham-bary mifangaro ho an'ny zavamaniry simenitra
Baibolin'ny vy vy
Baibolam-bary mitoto 140mm